“Kidnapping Akil Cassam Chenai” : mitaky 3 tapitrisa euros ireo mpaka an-keriny | NewsMada
“Kidnapping Akil Cassam Chenai” : mitaky 3 tapitrisa euros ireo mpaka an-keriny
Mivoaka ny resa-bola amin’izao momba ny fakana an-keriny karana farany teo. Volabe tsy toko tsy forohana ny tadiavin’ireo jiolahy. Ny mpitandro filaminana, mbola anatin’ny fikarohana…
Fantatra izao fa mitaky vola 3 tapitrisa Euros ireo mpaka an-keriny an’i Akil Cassam Chenaï, tany Toamasina. Io volabe io andrasan’izy ireo amin’ny fianakavian’ity mpandraharaha karana ity, ho takalon’ny famotsorana azy. Nalain’ny jiolahy an-keriny ny 2 febroary teo izy ary mbola tsy votsotra hatramin’izao. Mivoaka ny resa-bola ka asa raha hanome izany ny fianakaviany. Tsiambaratelo hatrany Ny fifanakalozana ara-bola eo amin’ny jiolahy sy ny fianakavian’ny nalaina an-keriny izay ao anatin’ny ka na ny mpitandro filaminana aza fanina amin’izany. Efa afaka ilay nalaina an-keriny vao mahalala avokoa ny rehetra.
Ny mampalahelo anefa, tsy misy tohiny ary tsy misy vokany mivaingana ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana manodidina ny fakana an-keriny. Raha ny filazan’ireo fianakavian’ny alaina an-keriny, toy ny hadinodino any ny resaka avy eo. Ny eo anivon’ny mpitandro filaminana indray milaza fa ny fanafenan’ireo lasibatra sy ny fianakaviany vaovao no anisan’ny mampanano sarotra ny famotorana lalina.
Marina avokoa izany rehetra izany, saingy mila vokatra ny olona manoloana ity trangana fakana an-keriny ity. Mety hoe ireo Karana sy ny mpanankarena no voakasika amin’izany, saingy misy fiantraikany amin’ny sarambaben’ny olona izany tsy fandriampahalemana izany.
Nandefasana komando mihitsy, raha izay no mahalaza azy tany Toamasina, vao nisy ity fakana an-keriny an’i Akil Cassam ity. Nahetsika ny mpitandro filaminana maro tany an-toerana. Nisy ny fisamborana olona valo, saingy tsy mbola votsotra ilay Karana. Ahina ho tsy misy ifandraisany amin’ireo mpaka an-keriny akory ireo nosamborina ireo.
Misy amin’ireo mpanao kidnapping hatramin’izay voatonontonona, kanefa ny sasany aza tokony mbola any am-ponja. “Familiviliana resaka”, hoy ny manamboninahitra iray. Na ny tany Toamasina, na ny teto Antananarivo, samy miandry vokatra ny rehetra. Efa dila ela ilay fanamby nataon’ny fanjakana hoe ho voavaha ao anatin’ny telo volana ny resaka kidnapping. Miandry ny rehetra, iza ny ao ambadika, mba ho hita ihany ve sa ireo mpanatanteraka baiko ihany no ho faty eo?